Gazety maneran-tany - laharana 8 - ny volana martsa
Home » About us » Newsletters » Gazety maneran-tany - laharana 8
Gazety maneran-tany - laharana 8
30 / 10 / 2019 30 / 10 / 2019 ny Antonio Gancedo
Ny 2 World March dia manohy ny lalany manerana ny kaontinanta afrikanina ary, amin'ny ambiny planeta, ny tohin'ny martsa dia mitohy amin'ny hetsika maro. Ity gazety ity dia mampiseho ny fiovan'ny asa ataontsika.
Miasa any amin'ny paroady, sisintany, ny diabe mifanakaiky, ny hetsika manokana toy ny «Ranomasimbe Mediteraneana» no amboarina, nomena ny fifantohana amin'ny fitazonana ny lamba sosialy amin'ny toerana samihafa; ny fahaizana sy ny zavakanto izay miara-mandeha amintsika na aiza na aiza alehantsika.
Taorian'ny asa faharetana, fanantenana sy fanantenana dia nambara tao amin'ny Chamber of Deputies of Italy i 2 World March for Peace and Nonviolence.
Ny solombavambahoaka Shiliana dia nanolotra volavolan-dalàna handavana ny ady amin'ny lalàm-panorenana ho toy ny endrika olana amin'ny fifanolanana.
Ny ekipa High Verbano Base dia nandray anjara tamin'ny diaben'ny sisintany 7ª ho an'ny fandriampahalemana "eny an-dàlana mankany amin'ny fandriampahalemana" ao amin'ny Ponte Tresa.
Tao anatin'ireo hetsika natao hampiroboroboana ny volana martsa, dia nandray anjara ny 8ª Interreligious March for Peace in Varese.
Avy amin'ny lafim-piarahamonina rehetra, ny hetsika dia azo tohanana sy omena mifanaraka amin'ny martsa maneran-tany. Fitsangatsanganana ho an'ny fandriampahalemana ao amin'ny nosy Giglio, Italia.
Mampiahiahy amin'ny fitazonana ny lamba sosialy amin'ny manodidina dia asa iray manampy amin'ny fandriampahalemana
Sonia Venegas Paz sy Gina Venegas Guillén no Amerikanina latina tokana amin'ny ekipa fototra izay nandeha tamin'ny lalana ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fahatomombanana.
Ekoatera nanatrika ny lalan'ny fandriampahalemana
Ny martsa maneran-tany 2 ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fahatoniana dia "sambo tanteraka". Ny 27 tamin'ny Oktobra dia manomboka ny sehatra "Ranomasin'ny Ranomasina Milamina", avy any Genoa sy 5 tamin'ny Novambra dia hihaona ny fihaonana amin'ny Peace Boat.
Mipoitra ny tanana masiaka izay mahatonga ny fo mahafaly amin'ny lalao atao amin'ny ankizy ary mamorona ho azy ireo milalao sy milalao miaraka aminy.
Eto isika dia hampiseho ohatra vitsivitsy, kitapom-batana fotsiny, momba ilay zavakanto tsy misy fepetra izay miaraka amin'ny 2 World March ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandriampahalemana
Ilay diabe manidina izao tontolo izao
Ny tselatra amin'ny zavakanto tamin'ny martsa manerantany
Gazety maneran-tany - laharana 7